विप्लवको ताजा अन्तर्वार्ता (भिडियो) : जेलभित्रको मोर्चा सम्हाल्न कार्यकर्तालाई अपिल ! – On Khabar
September 1, 2019 onkhabarComment(0)
कालिकोटका अग्‍नीपीडितको नाममा करोडौं भ्रष्टचार ! अग्नीपीडितको घर नेकपाले बनाइदिने घोषणा
December 29, 2018 December 29, 2018 onkhabar
अनखबर पौष १४,काठमाडौं कालिकोट जिल्लाको पलाता गाउँपालिका १ खाडाँमा भएको आगलागीलाई कतिपयले मौकाको चौका बनाईरहेका छन् । राजधानीमा बसेर अग्नीपीडिताको नाममा राहात संकलन गर्ने भन्दै ठूलो परिणाममा राहात संकलन गर्ने तर वितरण गर्दा भने थोरै र नाममात्रको वितरण गरेजस्तो गर्नको लागि गरेको स्थानीयको आरोप छ । गत पुस ८ गते भएको आगलागीले खाँडाका ४१ घरमात्रै […]
Banner News खेलकुद समाचार
दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट : नेपालको सानदार जीत , युएईको लज्जास्पद हार !
January 26, 2019 January 26, 2019 onkhabar
अनखबर माघ १२ नेपालले दोस्रो एकदिवसीयमा युएईलाई १४५ रनले हराउँदै शृंखला बरबार गरेको छ। २४३ रनको लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली युएई नेपाली बलरसामू टिक्न नसक्दा १९।३ ओभरमा अलआउट हुँदै ९७ रनमा समेटियो। युएईलाई सस्तैमा समेट्न नेपालका लागि सोमपाल कामीले ५ विकेट लिए भने सन्दीप लामिछानेले ४ विकेट हात पारे। यसअघि रोहितकुमार पौडेलले उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शन […]
काडमाडौं , ३० कात्तिक । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संग नेपालका लागि महामहिम अमेरिकी राजदुत ¥याण्डी डब्लु बेरीले आज भेट गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री कार्यकक्षमा भएको भेटमा संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म भएका काम,समृद्धिका लागि प्रदेशका प्राथमिकता,नेपालको विकासमा अमेरिकाले गरेको सहयोग र सहयोगका क्षेत्रबारे छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्रीले तीन तहको चुनावपछि राजनैतिक संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको, प्रशासनिक […]
रवि सर्तसहित ५ लाख धरौटीमा रिहा, के के हुन सर्त ?
पत्रकार हमाललाई निसर्त रिहा गर्न जनपत्रकार संगठनको माग